Vula i-365. Umthombo ovulekile ohlukile ku-Office 365 ne-Google Docs | Kusuka kuLinux
Sikwethulela Vula 365. Umthombo ovulekile ohlukile kuneHhovisi 365. Kulabo abangazi, i-Open 365 isebenza njengomqambi noma umhleli wamadokhumenti, nawo obavumela ukuthi bavumelaniswe efwini. Ingasetshenziswa ngeziphequluli zomshini eziphatha i-Linux, iWindows ne-Mac, kanye namadivayisi eselula anamasistimu we-Android, maduzane nge-iOS. Okwamanje ikwisigaba se-Beta, kepha uma ufuna ukuyizama, ukungena ekhasini layo elisemthethweni okwamanje kuyatholakala bhalisa.
Vula i-365 njengoba sishilo ngaphambili, inikeza ithuba lokuvumelanisa amafayela phakathi kwamadivayisi aphatha ubuchwepheshe bokugcina amafu. Ngaphezu kwalokho, ikuvumela ukuthi ubuke, uhlele futhi udale amadokhumenti efwini usebenzisa ubuchwepheshe obuhlinzekwa yiphakheji yomthombo ovulekile. I-FreeOffice online. Ukufakwa kwe- I-Seafile; insizakalo yokugcina ifu. FUTHI I-KDE; ngokuhlangana nohlelo lwayo lwezinhlelo zokusebenza zokuphathwa koxhumana nabo nengxoxo yevidiyo.
Ukuthola ukufinyelela kula mathuluzi kuyadingeka ukubhalisela insiza kwiwebhusayithi esemthethweni. Lapho ubhalisile enkonzweni, uzonikezwa i-imeyili ngokuzenzekelayo, ukuze ukwazi ukungena ngemvume nayo. Isivele ibhalisiwe uzoba nokugcina okungama-20 GB, impela impela uma uyiqhathanisa nezinye izinsiza ezifanayo. Okungakacaci okwamanje, ukuthi ngabe le-20 GB yesikhala izotholakala kuphela ngesikhathi sesilingo. Yize singazi Vula i-365 ingasetshenziswa ngaphandle kwezinkinga ukuyinika ukuqhubeka.
Ngemuva kokubhaliswa, futhi nensizakalo ivulekile, uzokwazi ukubona ngesikhathi sokuqala ukuthi ukubuka kwe- "Hub" kulayishwa kanjani ngokuzenzakalela. Ngalesi sikhathi, yonke imitapo yolwazi iyaboniswa futhi ngokuzenzakalelayo yabiwa nethimba lakho. Imitapo yolwazi noma amafayela angasuswa noma abiwe ku-inthanethi. Kuzoba nethuba lokwakha imitapo yolwazi emisha kuwebhu, unenketho yokubethela okuqukethwe ukunikeza ukuphepha okwengeziwe kulwazi olugciniwe.
Uzokwazi ukufinyelela lolu lwazi kuphela uma ufaka iphasiwedi, engaxhumene nephasiwedi ye-akhawunti yokungena ngemvume. Amafayela azovuleka ngokuzenzakalela kusixhumi esibonakalayo sewebhu esethulwe yisiphequluli esisetshenziswayo.
Uzokwazi ukufinyelela kokuqukethwe kwefolda ngayinye kuwebhu, onayo ukuhambisana namafomethi wefayela athandwa kakhulu. Lokhu kungabiwa, njengemitapo yolwazi, kubasebenzisi ngabodwa noma amaqembu.
Phakathi kwamanye amathuluzi kukhona inombukeli wesithombe lokho kuzokuvumela ukuthi ubuke noma yisiphi isithombe osifunayo, ngenxa yokuthi lokhu kuyi- iyahambisana namafomethi asetshenziswe kakhulu. Ngaphezu kwalokho, isidlali soxhumanoningi samavidiyo nomsindo siyatholakala.
Vula imithwalo engama-365 noma yiluphi uhlobo lwefayela lehhovisi kusixhumi esibonakalayo sewebhu. Ukufundwa kombhalo kulayishwa ngokushesha futhi kungahlelwa noma kuprintwe uma umsebenzisi ethanda kanjalo. Ukuhlela idokhumenti ingagcinwa ku-inthanethi noma kukhompyutha yakho. Kulula ukuyisebenzisa futhi kulabo abaphatha i-libreOffice, indawo yokusebenza izoba mnandi kakhulu futhi ifane. Amadokhumenti angathunyelwa futhi ngefomethi yoqobo noma ngenye ehlukile, inqobo nje uma ihambisana nensizakalo. Kufanele ukuthi umhleli uthatha imizuzwana embalwa ukulayisha ku-inthanethi, ngakho-ke kufanele ulinde kancane phakathi nale nqubo.
Uma sikhuluma nge ukuvumelanisa, phakathi nalokhu imisebenzi elindelwe iyenziwa, njengokungeza, ukulahla noma ukuhudula camafolda afuna ukuvumelaniswa efwini. Ungaqamba kabusha i-Library bese unika amandla i- ukubethela ngaphambi kokuvumelanisa. Amafolda nawo aguqulwa ngokuzenzekelayo abe yimitapo yolwazi lapho engezwa kuklayenti lokuvumelanisa. Kukho konke lokhu, izinketho ezahlukahlukene zizotholakalela ukuvumelanisa kanye neklayenti ledeskithophu. Phakathi kwezilungiselelo ezitholakalayo kungenzeka ukulanda nokulayisha imikhawulo yejubane, lungiselela insiza; Lokhu kufanele kwenziwe lapho kususwa umtapo wezincwadi enkombeni yasendaweni noma lapho umtapo wezincwadi ungatholakali kuseva. Futhi ekugcineni ukwenziwa kungasebenzi kwe-http ukuvumelanisa.
Ukuvula i-365 ngakho konke okungenhla kuyinketho kulayini kulabo abafuna ukusebenza ngokuhlelwa kwefayela endaweni efana ne-libreOfffice. Ngendawo yokugcina amafu wawumkhulu impela, kungenye indlela ethokozisayo okufanele izanywe.
Uma ufuna ukwazi ukuthi ukulanda insiza kutholakala kuziphi izinhlelo, ungafinyelela kulesi sixhumanisi: https://open365.io/download.html
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Vula i-365. Umthombo ovulekile ohlukile ku-Office 365 ne-Google Docs
Kade ngiyivivinya, ihamba kancane uma iqhathaniswa nezinye izinsiza, ngiyethemba bayayithuthukisa insiza. Izindaba ezimnandi.
Okubi kakhulu ukuthi ayinayo iklayenti le-32-bit Linux !!!
Sengivele ngiyisebenzisa ku-Opensuse futhi kuzinzile impela ngokuba yi-Beta. Kuyiqiniso ukuthi kufanele ithuthuke, i-beta, kodwa ngombono wami iqale kahle kakhulu
Ngisho, ungashumeka amaspredishithi nemibhalo kuwebhusayithi?
Izamile, kepha ilenga. Manje angikwazi ukuyikhipha kubuntu. Noma iziphi iziphakamiso zendlela yokukwenza?
I-Open Science Project ifika, uhlelo lwamahhala lwesayensi lokukhulisa ulwazi